Warbixinta loogu tala galay adiga iyo ilamahaada ee ku saabsan tallaalka covid-19 - 1177 Vårdguiden
Vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år i Sörmland - somaliska
Warbixinta loogu tala galay adiga iyo ilamahaada ee ku saabsan tallaalka covid-19
Vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år i Sörmland - somaliskaThe content concerns Sörmland
Dhawaan ayaad adiga buuxiyey 12 sanno iska tallaali kartaa covid-19. Tallaalka ayaa kaa difaacaya inaad aad u xannuunsato isla markaana hoos u dhigaya halista inaad dadka kale qaadsiiso cudurka. Xataa hadduu mar hore kugu dhacay covid-19 ama uu jirkaadu leeyahay lidka jirka waxaa lagugula talinayaa inaad is tallaasho. Tallaalka covid-19 waa lacag la’aan waana ikhtiyaari.
Sidan ayaad isu tallaali kartaa
Iskuulo badan ayaa tallaalka bixiya wakhtiga iskuulka. Waxaad warbixin intaa dhaafsan ka heleysaa iskuulkaada.
Haddii aanu iskuulkaadu bixin tallaalka ama aad dooneyso inaad is tallaasho goor hore waxaa lagaa soo dhoweynayaa goobaha Region Sörmland si aad isu tallaasho. Haddii aad doorato inaad halkan iska tallaasho waa inuu qof qaan gaar ah kula socdaa. Qofka qaan gaarka ah wuxuu u baahan yahay inuu wato warqad aqoonsi shaqeyneysa (kaarka id-ga ama baasaboor).
Goobaha ayaa ku yaal afar meel:
Eskilstuna – Kungsgatan 10 (Gallerian)
Katrineholm – Västgötagatan 16
Nyköping – Olof Palmes väg 1B (Träffen)
Strängnäs - Seminarievägen 10A
Uma baahnid inaad ballan qabsato si aad u tagto goobahaa.
Waxaad halkan ka heleysaan saacadaha ay goobahaasi furan yihiin: 1177.se/sormland/vaccin-barn-sormland
Goobo cusub ayaa laga furi karo meelo badan. Haddii aadan buuxin 12 sanno waa inaad u kaadisaa is tallaalka ilaa iyo inta aad ka buuxineyso 12 sanno. Halkan kala soco warbixinta: 1177.se/sormland/vaccin-barn-sormland
Laba foom oo lagaa baahan yahay inaan la timaado goobta tallaalka
Waxay warqaddan wadataa laba foom oo lagaaga baahan yahay inaad la buuxiso mas’uulka/waalidka isla markaana aad u soo qaadato goobta tallaalka:
Oggolaansho ka timid waalidka. Waa inuu waalidka oo dhan saxiixaa
Haddii aad jirran tahay ama aad xannuun dareemeyso
Haddii aad qabto infakshan markaa, haddii aad tusaale ahaan qabto qandho ama hargab, sug ilaa aad ka caafimaadayso ka hor intaadan is tallaalin. Haddii aad wax kale iska tallaashay, waxaad u baahan tahay inaad sugto ilaa 7 maalmood ka hor intaadan iska tallaalin covid-19.
Waxaad u baahan tahay laba goojo oo tallaalka ah.
Markaad goojada koowaad qaadaneyso ayaa laguu sheegayaa goorta aad goojada labaad qaadaneyso. Inta uu jirku ka helayo difaac ku filan waxay qaadan kartaa ilaa iyo laba todobaad goojada ugu danbeysa kadib.